आस्थासँग प्रहरीको ‘बदला’ : छाड्छु भन्दै हिरासतमा ‘अभद्र व्यवहारको अनुसन्धानमा हिरासत कानुनको दुरुपयोग’
नेपाल लाइभ सोमबार, माघ १३, २०७६, २०:५८:००
काठमाडौं- गायिका आस्था राउत सिक्किमको कार्यक्रम सकाएर सोमबार काठमाडौं फर्किए लगत्तै परिवारको साथ उनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगिन्।
विमानस्थलमा जाँचका क्रममा महिला प्रहरीसँग भएको झाँगलझुँगलमा अभद्र व्यवहारको आरोप खेपेकी उनको परिवारका सदस्यले उनी नेपाल आए लगत्तै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउने वचन दिएका थिए। आस्थाको परिवारले वचन पालना गर्‍यो।
बिहान सरकारी कार्यालय खुले लगत्तै उनी प्रहरी परिसर टेकुमा हाजिर भइन्।
माघ १ गते त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा महिला प्रहरीसँग भएको विवादपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो लाइभ गर्दै प्रहरीविरुद्ध बोलेका केही शब्दप्रति प्रहरी असन्तुष्ट थियो।
माघ ३ मा काउन्टरमा अवैध रूपमा सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गराएको प्रहरीले सोही दिन आस्थाविरुद्ध महिला प्रहरीको जाहेरी लिएर माघ ५ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यही मुद्दा सल्टाउन उनी सोमबार प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनले आफू प्रहरीलाई 'कोअपरेट' गर्न आएको बताइन्।
आस्थाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अभद्र व्यवहारमा गायिकालाई थुन्ने तयारीप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि प्रहरी केही नरम देखिएकाले सोमबारै यो केस मिलापत्रमा पुगेर सल्टिने संकेत देखिएको थियो।
आस्था १३ दिनपछि प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी थिइन्। उजुरी परिसकेको, प्रहरीले प्रमाण स्विकार गरेको विमानस्थलको फुटेज र आस्थाको फेसबुकको भिडियो लाइभ प्रहरीसँगै रहेको र पीडित मानिएकी प्रहरीको बयान लिन आस्थाको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रहरीले आस्थाको बयान मात्र बाँकी राखेर मुद्दाको औपचारिक प्रक्रियाका लागि आस्थालाई कुर्न सक्थ्यो।
नियन्त्रणपछिको प्रक्रिया अनुसार वीर अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। दिउँसो १ बजेतिर प्रहरीले आस्थाको बयान सकाएर काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझायो। न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा उनको बयान शुरु भयो। सबै प्रक्रिया छिटोछिटो भइरहेको थियो।
आस्थाको परिवारले सोमबार नै उनलाई घर लैजान पाउनेमा आशावादी थियो। तर एकाएक सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै आस्थालाई प्रहरी कार्यालयमै फर्कायो। अहिले उनी परिसरको हिरासतमा छिन्।
‘प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धानमा पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएका थियौं,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले भने, ‘तर प्रक्रिया पूरा नभएको भनेर उनलाई फिर्ता पठाएकाले कानुनी प्रक्रिया अनुसार हिरासतमा राखेका छौं।’
भ्याइएन कि बदला!
आस्थालाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने मुख्य आधार महिला प्रहरीको जाहेरी नै हो। प्रहरीले चोरबाटोबाट सार्वजनिक गरेको क्लोज सर्किट टेलिभिजनको फुटेज हेर्ने हो भने त्यसमा आस्थाले मात्रै हैन महिला प्रहरीले पनि अभद्र व्यवहार गरेको देखिन्छ नै। तर ती महिला प्रहरीलाई अभद्र व्यवहारमा प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याएको देखिन्न।
महिला प्रहरीमाथिको व्यवहारभन्दा पनि प्रहरी आस्थाले फेसबुक लाइभमा प्रहरीलाई ‘डन्ठे’, ‘फुलिस’लगायत भनेकोमा रिसाएको थियो।
सोमबार प्रक्रिया नसकिएको भन्दै हिरासतमा राख्नुको अर्थ ‘एक दिन भने पनि हिरासतमा राखेर प्रहरीविरुद्ध बोल्नेलाई सबक सिकाउने’ नियत देखिन्छ।
हिरासत कानुनसम्मत हो त?
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलका अनुसार आस्था घटनामा फौजदारी संहिताको आशयको गलत प्रयोग भएको छ।
नयाँ फौजदारी संहिताले केही मुद्दामा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिने परिकल्पना गरेको बताउँदै उनले भने, ‘आस्था राउत राष्ट्रिय कलाकार भएकाले अभद्र व्यवहारमा उनलाई थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो। थुन्ने भन्दा नथुनेरै अनुसन्धान गर्न सकिने फौजदारी संहिताको आशयको गलत प्रयोग भएको छ।’
के कसुर लाग्यो?
महिला प्रहरीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ११८ अनुसार अभद्र व्यवहार कसूरमा पक्राउपुर्जी माग गरेको थियो। सोही अनुसार उनीविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भई सोमबार ४ दिनको म्याद थप भएको हो।
सो दफाअनुसार कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न नहुने’ उल्लेख छ। सो कसुर प्रमाणित एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
मंगलबार : हिरासत कि धरौटी?
अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीको दाबी अनुसार प्रहरीको काम सोमबारै सकिइसकेको छ।
बयानलगायतका अन्य प्रक्रिया नसकिएकाले उनलाई सरकारी वकिलले हिरासतमा राख्न प्रहरी कार्यालय फर्काएको हो। यदि दाबी सत्य हो भने आस्था मंगलबार धरौटीमा रिहा हुन सक्छिन्।
‘यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास?’
गायिका आस्थाले जे गरिन् त्यो हिरासतमै राख्नुपर्ने प्रकृतिको अपराध थिएन। तर राज्यले रिस साँध्न आस्थालाई हिरासतमा राखेरै छाड्यो। एयरपोर्टको दृश्य देख्दा महिला प्रहरीको व्यवहार पनि ठिक थिएन।
आस्था प्रकरण मानिवय त्रुटीको उपज हो। एयरपोर्टमा प्रहरीले जस्तो काम गर्‍यो, आस्थाले त्यसको प्रतिक्रिया मात्रै दिएको हो।
आस्थाले रिस पोखेको मात्र हो भन्ने विमानस्थलकै भिडियोमा प्रष्टै देखिन्छ। तर राज्यले हरेकलाई अपराधी देख्न थाल्यो। यस्तो हो भने अब राज्यको मानसिक अवस्था के छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको। र, यो एक किसिमको खतराको संकेत हो। यो निरंकुशताको संकेत हो।
अब राज्यको कुनै निकायमाथि सर्वसाधारणले रिस पोख्नै नहुने हो त?
राज्यका क्रियामाथि प्रतिक्रिया जनाउनेलाई राज्यले अपराध भन्न थाल्ने हो भने अब यो समाजमा राज्यले मान्छे होइन, मेसिन बनाए हुन्छ। मान्छे हो भने त भावनात्मक प्रतिक्रिया हुन्छन् नै जसलाई हामीले मानवीय त्रुटीका रुपमा लिनुपर्छ। त्यो अपराध होइन।
आस्थालाई हिरासतमै राख्नुले के संकेत गर्छ भने अब शासक र शासक वरिपरीका मान्छेचाँही देउता हुन् र उनीहरुमाथि केही प्रतिक्रिया जनायो भने त्यो अपराधी ठहरिनेछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामी यो कस्तो निरंकुशताको अभ्यास गरिरहेका छौ?
यो त अत्यन्तै खतराको संकेत हो।
१‍ बयान नसकिएपछि आस्था आज हिरासतमै
२ आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न प्रशासनको अनुमति
३ गायिका आस्था राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
४ ‘प्रहरीलाई सघाउन तयार छु, प्लिज फरार नभन्दिनुस्’
५ आस्था प्रकरण : घर फर्किने आइजीलाई संगठनको लज्जाजनक उपहार
६ रिसमा फेसबुक लाइभ गर्दा समस्यामा आस्था
७ सामाजिक सञ्जालको जञ्जालमा सेलिब्रिटी